Yintoni i-amenorrhea kunye nendlela yokuyiphatha kakuhle? Kunokuphatha i-amenorrhea? Indlela yokuchonga izizathu ze-amenorrhea?
Izizathu ze-amenorrhea kunye nezindlela zokunyanga.
U-Amenorrhea ligama lonyango ngokungabikho kokuya esikhathini. Inyaniso ayikho nje ukulibaziseka kwiintsuku ezimbalwa okanye kwiiveki. Inkambo yesi sifo ibonisa ukungabikho kwenyanga ukuya kweenyanga. Esi sifo senziwa kwabasetyhini abaneminyaka eli-16 ukuya kwe-45 kunye nezimbangela zokuvela kwayo ziyakwephulwa kumzimba wesetyhini. Kukho iintlobo ezininzi zesi sifo. Ngamnye wabo ufuna indlela ekhethekileyo, ngoko siza kuqwalasela ngokuqhelekileyo kubo, kwaye sichaze ncinane malunga nendlela echanekileyo yokunyangwa kwesi sifo.
Nangona kunjalo ukuba izizathu ze-amenorrhea zingabangela ukuphazamiseka ngokomzimba nangokwengqondo, sisifo sesisu. Ingcali yengqondo iza kukunceda ukulungisa iingxaki zengqondo ezinokubangela ukuba utshintsho lomzimba, kodwa alukwazi ukunyanga lesi sifo. Kukho nawuphi na, unyango kufuneka lusekelwe kwisifo esicacileyo, esinokusekelwe kwimeko yesifo.
Ngokuqhelekileyo lolu hlobo lwe-amenorrhea lwenzeka xa kukho iintlobo zeenguqu ze-hormone ezenzeka kumzimba wesetyhini. Inyaniso kukuqwalasela ukuba akuyiyo ingxaki yokungasebenzi, kodwa utshintsho oluqhelekileyo emzimbeni. Oku kwenzekayo xa ibhinqa linempilo engafanelekanga yezesondo.
Esi sifo sibonakaliswa ukungabikho kokuya esikhathini esiqhelekileyo malunga nomvelaphi wama-ovari anempilo. Kwezinye iimeko, kunzima ukuba ibhinqa, okanye ingenakwenzeka, ukuba ukhulelwe. Olu hlobo lwesifo luvame ukuqhutyelwa ngethuba lokutya, ukuphuma kwindoda kunye nobuntwana, xa iinyanga zingekaqalanga. Kule meko kuyinto evamile, inkqubo yendalo.
Kodwa kukho i-amenorrhea ye-pathological, ebonisa ukuphulwa okukhulu emzimbeni. Unokugula ngokupheleleyo nakunoma yiphi ubudala. Kukho izizathu ezininzi, ngoko siya kuziqwalasela ngokubanzi iinkcukacha.
Okokuqala, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba nayiphi na ukulibazisa kwimihla, ngokukodwa ixesha elide, kufuneka libe sisizathu sokunakekelwa kwonyango. Nguye kuphela onokwazi ukuxilonga ngokuchanekileyo nokucacisa izizathu zesifo, ezinokubangelwa kwiimeko ezahlukeneyo: i-anatomical, ifa okanye i-psychological.
U-Amenorrhea kaninzi uvela kumantombazana amancinci, amancinci. Oku kungenxa yokulibaziseka ekuphuhlisweni komzimba. Kodwa ezi zinto zingenakulinganiswa ngokupheleleyo, kuba ukulibaziseka ekuphuhlisweni kwezitho zobulili kunokwenzeka, oko kungenziwa kuphela ugqirha emva kokuhlolwa kunye ne-ultrasound.
Ngaphantsi nje i-amenorrhea ivela ngenxa yezinto eziza kuzaliswa. Ngokomzekelo, ukuba umama wafika ngokukhawuleza, kuya kwenzeka kwintombi.
Okwangoku, oogqirha baqhubeka bethetha malunga ne-amenorrhea, eyenzeka ngenxa yeengxaki zengqondo. Uxinzelelo olunomdla luyakushintsha umjikelezo wokuya esikhathini, kunye nokubangela ukubambezeleka okukhulu. Kwezinye iimeko, kwangoko kusenokwenzeka ukuba ukuphuma kwimiva kusenokwenzeka. Ngokuqhelekileyo, unokunqoba le meko ngokwakho, njengoko abantu banokujamelana neemvakalelo ngaphandle kokungenelela kwezokwelapha.
Kwezinye iimeko, i-amenorrhea ingabangela umsebenzi owenziwe ngokweqile kunye nesondlo esingenamlinganiselo. Kubalulekile ukukhumbula ukuba umzimba wesibhakabhaka ufuna unyango olukhethekileyo, ingakumbi ngexesha lokuya esikhathini. Ngokufanayo, ukutya kunokusebenza. Ukuba ibhinqa ayitholi ivithamini ezaneleyo, amaminerali kunye nezinye izondlo, umzimba uyaqala ukungaphumeleli.
Kukho iindlela ezininzi zokuphatha i-amenorrhea, kuxhomekeke kwisizathu sokubonakala kwayo.Ukuba i-amenorrhea ibangelwa ukungondleki, ukutya okanye ukuphuhlisa ngokwaneleyo ugqirha uya kubeka inkqubo yokutya ekhethekileyo. Akujoliswe nje kuphela kwisethi yemisipha kunye nobunzima bomzimba, kodwa nokulungelelanisa imvelaphi ye-hormonal.
Ungamangaliswa ukuba ugqirha, kwiinkqubo zonyango lwe-amenorrhea, uya kuncomela ukuba ukhangele ingcali yengqondo. Ngokuqhelekileyo, imvelaphi yeemeko eziba yimbangela ebalulekileyo yokuqala kwesi sifo.
Izizathu ezibangela ukuhlaziywa kwe-Anatomical zilungiswa kuqala, zize zenzeke kuphela unyango olubuyiselayo. Kwakhona, ugqirha unokunika umyalelo wokukhulelwa komlomo ukulawula imvelaphi ye-hormonal nokubuyisela ukusebenza kwimihla.
Kukho nawuphi na, musa ukuzigulisa. Njalo xa uziva ungavumi, qhagamshelana nodokotela. Oku kuya kunceda ukuphepha iingxaki ezinokwenzeka ngenxa yonyango olungalunganga.
Izifo zeso kunye namehlo omntu
I-Anatomy: ilungu lomntu liyintliziyo
I-Stew in pots
Umask ovela kwiqanda: zokupheka zasekhaya ezinokubaluleka kweenwele
Sibuyisela ubunzima bethu kwisiganeko kwinyanga
Ndingayicoca njani isibindi?
Izimo zesini ezingafaniyo: indlela yokufumana indlela yokuphuma
I-Vitamin isiselo kwi-strawberry kunye nemango
Inyama yesiFrentshi nenkukhu
Indlela yokuphelisa ukwesaba ukufa
Ngaba intombazana ingabiza iqabane layo kuqala, ingcebiso yengqondo?
Indlela yokugqoka umthi weFeng Shui: Sizisa uvuyo, impilo kunye nemali endlwini